२७ वर्षपछि अमेरिकामा उच्च कर कटौती - Naya Patrika
२७ वर्षपछि अमेरिकामा उच्च कर कटौती
एजेन्सी न्युयोर्क, १७ मंसिर | मङि्सर १७, २०७४
राज्यकोषमा लुटतन्त्र हाबी भएको डेमोक्र्याटिकको आरोप –
अमेरिकी माथिल्लो सदन सिनेटरले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बृहत् कर कटौतीसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गरेका छन् । विधेयक पारितलाई माथिल्लो सदनमा ट्रम्पको विजय मानिएको छ । सिनेटले समर्थन जनाएसँगै सन् १९८० पछि पहिलोपटक अमेरिकी कर प्रणालीमा ठूलो उथलपुथल हुने भएको छ । सो विधेयकलाई एक महिनाअघि तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभले स्वीकृति जनाएको थियो ।
धनीलाई मात्र फाइदा
कर कटौतीसम्बन्धी विधेयकको पक्षमा ५१ सिनेटर मतदान गरेका थिए । ४९ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । यसअघि लामो समयदेखि चलेको सिनेटको बैठकमा कर कटौतीसम्बन्धी विभिन्न संशोधन भएका थिए । विधेयकलाई डेमोक्र्याटिक पार्टीले विरोध गरेको छ । कर कटौतीले धनी र ठूला व्यापारिक घरनालाई मात्र फाइदा हुने डेमोक्र्याटिकले बताएको छ । सरकारले कर्पोरेट क्षेत्रमा तीव्र कर कटौती गर्ने योजना गरिरहेको छ । तर, सिनेटको संयुक्त समितिले कर कटौतीले बजेटमा एक खर्ब डलर नोक्सान हुने चेतावनी दिएको छ ।
के हो नयाँ कर विधेयक ?
कर कटौती तथा रोजगारी ऐनअन्तर्गत कर्पोरेट कर दरमा विद्यमान ३५ प्रतिशतबाट कटौती गरी २० प्रतिशतमा झारिनेछ । त्यस्तै अमेरिकीहरूको भलाइका लागि र भविष्यमा नाफा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले खोलिएका कम्पनीलाई विशेष कर छुट दिइनेछ । सिनेटको संयुक्त समितिले कटौतीले संघीय सरकारलाई भारी नोक्सान हुने चेतावनीका बाबजुद सो विधेयक सिनेटमा पेस गरिएको थियो । आर्थिक वृद्धिले कर कटौतीबाट हुने क्षतिलाई परिपूर्ति गर्ने ह्वाइट हाउसको दाबी कमिटीले अस्वीकार गरेको छ । सबै तहको आम्दानी भएका प्रायः अमेरिकीको सन् २०२६ सम्म शिष्ट कर कटौती हुनेछ । तर, त्यसपछि ७५ हजार डलारभन्दा न्यून आय गर्ने परिवारमाथि उच्च कर लाग्न सक्ने संयुक्त समितिले अनुमान गरेको छ । सरकारले पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले ल्याएको स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन ओबामा केयरअन्तर्गत करदाताले स्वास्थ्यसम्बन्धी बिमा किन्नुपर्ने वा जरिवाना सामना गर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान ल्याउन लागेको केही विरोधीले आरोप लगाएका छन् ।
के छ सिनेटरको प्रतिक्रिया ?
मतदानपछि सिनेटमा डेमाक्र्याटिकका नेता चुक सुमरले आगामी वर्ष हुने मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकनले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘रिपब्लिकनका मेरा साथीहरूले यही विधेयकलाई लिएर सन् २०१८ र त्यसपछि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । रिपब्लिकन पार्टी कहिल्यै पनि मध्यम वर्गीय मानिसका लागि कर कटौती गर्ने पार्टी बन्न सक्नेछैन,’ उनले भने । नयाँ कानुनले सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रावधानमा गम्भीर असर गर्ने उनले दाबी गरे ।
डेमोक्र्याटिकका सिनेटर बर्नी स्यान्डर्सलगायत अधिकांशले विधेयकको चर्को विरोध गरेका छन् । अमेरिकाको राज्यकोषमाथि लुटतन्त्र भएको स्यान्डर्ससले आरोप लगाए । तर, रिपब्लिकन सिनेटर मिच म्याक कोनेलले अमेरिका नयाँ आर्थिक युगमा प्रवेश गरेको बताए ।
विधेयक पारित भएपछि ट्रम्पले खुसी व्यक्त गरेका छन् । कटौतीको पक्षमा मतदान गरेकामा ट्रम्पले सिनेटरलाई धन्यवाद दिएका छन् । कटौतीले अमेरिकाको एउटा वर्गलाई राहत दिने ट्रम्पले बताए । ‘बृहत् कर कटौतीले वर्किङ फेमिलीलाई फाइदा गर्नेछ,’ उनले भने । सो विधेयकलाई गत महिना तल्लो सदनले पारित गरेको थियो । सिनेटको स्वीकृतिसँगै विधेयकमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नेछन् र त्यसले कानुनस्वरूप लिनेछ । राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानमा ट्रम्पले कर कटौती गर्ने वाचा गरेका थिए ।
टिलर्सनलाई हटाउन खोजिएको छैन
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशमन्त्री रेक्स टिलर्सनलाई हटाउन लागेको भन्ने समाचार असत्य भएको दाबी गरेका छन् । ‘ह्वाइटहाउसले टिलर्सनलाई हटाउन लागेको वा टिलर्सनले विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी छोड्न लागेको भन्दै सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार झुट र भ्रामक हुन्,’ ट्रम्पले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘उहाँले हामीलाई छोड्न लाग्नुभएको होइन, उहाँसँग हामी सँगै काम गर्नेछौँ ।’
अधिकांश अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूमा ट्रम्प र टिलर्सनको सम्बन्ध नराम्रो भएको टिप्पणी गरिरहेका वेला ट्रम्पको प्रतिक्रिया आएको हो । ट्रम्पले भनेका छन, ‘हामी दुईका बीचमा त्यस्तो कुनै नराम्रो सम्बन्ध छैन ।’ विदेशमन्त्री टिलर्सनले पनि शुक्रबार ती समाचारलाई हास्यास्पद समाचार भन्दै गलत भएको स्पष्ट पारेका थिए । टिलर्सन अर्को हप्ता युरोप भ्रमण सुरु गर्ने तयारीमा छन् । उनले ब्रसेल्स, भियना र फ्रान्समा नेटोका नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम छ ।